Miala Voly Amin’ny Fianarana Ny Teny Kwak̓wala Ho An’ny Mpianany Miaraka Amin’ny Fanampian’ny Sary Sy soratra Vitsivitsy · Global Voices teny Malagasy
Miala Voly Amin'ny Fianarana Ny Teny Kwak̓wala Ho An'ny Mpianany Miaraka Amin'ny Fanampian'ny Sary Sy soratra Vitsivitsy
Voadika ny 23 Febroary 2017 15:04 GMT
Sary-sy-soratra avy amin'i Pewi Alfred. Dika: “Mangatsika androany. Tena mangatsiaka”
Mandray anjara amin'ny Fanamby Sary-sy-Soratra amin'ny Tenindrazana amin'ny alalan'ny famoronana sary-sy-soratra amin'ny Keny Kwak̓wala l i Pewi Alfred (Ilaibe manary fahefana).
Tsy isalasalana, fa fomba hafa hampandraisana anjara ireo ankizy kely manomboka amin'ny garabola ka hatramin'ny kilasy faha-7 izay ampianariny teny ao amin'ny Sekoly T̓łisalagi'lakw ao Alert Bay, Kolombia-Britanika ao Canada ny fanamby sary-sy-soratra. Nanomboka izy 19 taona, mpampianatra teny tao amin'ny fiarahamonina misy azy i Pewi, teratany Nimpkish. Ny ankamaroan'ny fianarany ny teny dia angamba avy amin'ny renibeny sy ny hafa, izay nanoro sy nampianatra azy ny fomba famakiana sy fanoratana ny teny ka nanampy azy hanana voambolana marobe. Nandritra ny taona maro, nandray anjara tamin'ny fadraketam-peo, tamin'ny antsafa, boky sy hira ho an'ny Vavahadintseraseram-Piarahamonina Kwak̓wala ao amin'ny First Voices izy. Fanampin'izany, nanampy tao amin'ny mozea ao an-toerana Foibe Ara-kolontsaina U’mista izy.
Tamin'ny antsafa niarahana tamin'ny Rising Voices, niresaka momba ny anjara toeran'ny famoronana sary-sy-soratra eo amin'ny fampianarana sy ny fanampiana ny mpianany hankafy ny fizotram-pianarana ilay teny izy. Matoky tanteraka ny famelomana indray sy ny fitehirizana ny teny i Pewi, ary mihevitra izy fa tsara kokoa ny miaraka miala voly amin'izany dingana izany. Hoy izy hoe: «Afaho ny tenanao, andeha hiara-hiasa mba hiaro ny tenintsika. Andeha hivoy lakana mba ho tonga any amin'izay tiantsika aleha. » Ho an'ny Fanamby #MemeML, nizara sy nanondro ity sary-sy-soratra ity voalohany indrindra tao amin'ny Facebook izy.
Rising Voices (RV): Manao ahoana ny toetoetry ny teninareo ankehitriny ao amin'ny aterineto sy ivelan'ny aterineto?
Pewi Alfred (PA): Tsy mba ampiasaina any an-trano ny Kwak̓wala , satria maro ireo tsy mampiasa ny teny. Mampiasa ny teny hatrany araka izay azoko atao aho rehefa ato amin'ny aterineto, mizara hira, dikan'ny dihy sy resaka fohy miaraka amin'ny havako. Manao izay azonay atao mba hanoratana amin'ny fiteninay amin'ireo teny hainay sy nianaranay ihany koa izahay. Hatramin'ny 7 ora isan'andro, rehefa mampianatra ao amin'ny tarika mpihiran'ny sekoly ao an-toerana, dia mampianatra mpianatra hira, dihy sy teny miisa 65 aho amin'ny fampiasana fomba famaly Ara-batana manontolo. Hanomboka hampianatra kilasy aorian'ny fianarana any an-tsekoly indray izahay mba hanampiana amin'ny fianarana, famakian-teny ary fanoratana. Manantena ny fahazotoana sy ny fanoloran-tena avy amin'ny fiarahamonina izahay satria mahatsapa aho fa ilaina izany, ary koa hiha-liana hatrany sy hihetsi-po ny olona. Mino aho fa fanombohana tsara amin'ny aingam-panahy sy ny risi-po izany sary-sy-soratra izany.
PA: Nandefa rohy ho an'ny fanamby sary-sy-soratra tamin'ny mailaka ny mpampiasa ahy. Nirotsaka avy hatrany tamin'izany aho ary nahatsiaro fa tena zava-dehibe foana ny mandrisika ny fampiasana ny teny, sy mampandroso ny hafa mba hampiasa izany no sady miala voly. Ilaina atomboka any ho any izany ary mahatsiaro fa mankafy izany ny olona! Hevitra mamirapiratra izany izay nalain'ny hafa avy hatrany taty amiko ny fanamby ary nanomboka nanampy teo noho eo ry zareo. Nandefa izany tany amin'ireo hafa marobe mpampiasa ny teny ao amin'ny faritra misy anay ihany koa aho ary mamorona sy mandefa sary-sy-soratra izy ireo amin'ny alalan'ny fanamarihana ny anarako ao amin'ny lahatsoratr'izy ireo. Manomboka mamorona ny sary-sy-soratro manokana aho miaraka amin'ny GIF raha vao mahita izany miaraka amin'ireo mpianatro salantsalany aho. Tena lasa mahay miteny sy mamaky tsara izy ireo ary nahita izay rehetra navoakako hatramin'izao ary mahita vazivazy amin'izany. Manana ny azy ireo izay mahafinaritra raha alefa ihany koa izy ireo ankehitriny. Mino aho fa nisy fiantraikany tsara tao amin'izy ireo ny famolavolana andraikitra ho azy ireo mba hizara izay maha-izy azy ireo amin'ny maha-Kwakwa̱ka̱’wakw azy ireo.
PA: Araka ny nolazaiko teo ambony, fa nizara tamin'ireo hafa mpampiasa ny teny Kwak̓wala aho. Namoaka ny sary-sy-soratra azy ireo manokana taty amiko izy rehetra ary manao fanamby amin'ny olon-kafa indray izahay isan'andro, miaraka amin'ny vazivazy ny sasany, ny sasany miaraka amin'ny teny matotra izay tian'ny olona ny mianatra azy. Fitaovana tena mahafinaritra izany ary fomba hafa hizarana ny teninay amin'ny hafa. Tsy mino aho raha mino ny hafa fa mianatra izy ireo saingy azo antoka fa niala-voly izy ireo namaky izany. Ankehitriny, satria matoky izany aho, tiako ny mipaka any amin'ireo zokiolona ao amin'ny fiarahamoninay mba hanampy sary sy soratra miaraka aminay, tsy afaka manao izany izahay raha tsy eo izy ireo.
Jereo ireo sary-sy-soratra marobe avy amin'ny Mother Language Meme Challenge amin'ny fiteny isan-karazany manerantany amin'ny alalan'ny fijerena ny tenirohy #MemeML ao amin'ny Instagram, Twitter, na Facebook. Misy ihany koa ny vondrona Facebook hanaovana Fanamby ahitana ny fandraisana anjaran'ny rehetra manerana izao tontolo izao.
12 ora izayvondrom-piarahamonina